Baphekwe ngemibuzo abesobengameli eKenya | isiZulu
Baphekwe ngemibuzo abesobengameli eKenya
Kushone 7 kuhlaselwa ithempeli eKenya
Nairobi - Abaholi abayisishiyagalombili abagaqele isikhundla sobengameli eKenya babhekene nengqinamba yokulwa nenkohlakalo kanjalo nodaba oluthinta ukubuyiswa komhlaba, lokhu kugqame ngoMsombuluko ngesikhathi kuqhubeka inkulumompikiswano eyandulela ukhetho.
Lolu khetho luza ngemuva kweminyaka emihlanu kwabanjwa ukhetho, nokwaphetha ngokuthi kube nezehlakalo zokuchitheka kwegazi, kwashona okungenani abantu abangu-1 100, kwathi abanye abaningi basala bengenamakhaya.
Izimbangi ezinkulu u-Uhuru Kenyatta noRaila Odinga, yibo ababhekeke kakhulu kulolu khetho oluzobanjwa mhlaka-4 Mashi.
UKenyatta uyiSekela likaNdunankulu, aphinde abe yindodana yalowo owabe engumengameli wokuqala wezwe uJomo Kenyatta, owaphatha phakathi kuka-1964 no-1978, nobhekenene namacala ngaphansi kwe-International Criminal Court (ICC).
UKenyatta, u-Odinga nezinye izimbangi eziyisithupha, baphekwe ngemibuzo mayelana nezinhlelo zokuzama ukuqinisa umnotho wezwe, ukuqinisa imithetho ebhekele abasebenzi kanjalo nezimayelana nomhlaba.